I-PVC yokugezela okuyize
Veneer yokugezela okuyize
I-Lacquer yokugezela okuyize
Umcengezi wamapulangwe amaningi
I-Standing Basin yamahhala
I-Wall Hung Basin
Idizayini yokugezela yaseKZOAO, Ekhethekile neNew
Izindlu zokugezela zihlukile ekhishini, indawo ebaluleke kakhulu ekhaya. Ukungasho ukuthi ziyadingeka impela, zihle futhi ziyisitayela. Izindlu zangasese zifana kahle nokwakhiwa kwekhaya kwanamuhla. I-KZOAO 2021 Idizayini entsha yekhabethe lokugezela, eyenziwe nge-rock plate, iqondisa ukuthambekela komkhakha.
Umyalo Wokunakekela IKhabhinethi Yangasese
IKhabhinethi yokugeza yaseKZOAO yenziwe ngebhodi lezinhlayiyana, i-MDF nezinto zeplywood. Ukugcina ifenisha isebenza kahle, sicela ulandele le miyalo ngokucophelela ngaphambi kokuqala ukuyifanela. Beka ifenisha endaweni ethambile ukugwema noma yimuphi umonakalo onjengezikhafu noma imihuzuko futhi uhlole njenganoma iliphi iphutha ...
Lapho ukhetha okugcwalisa ubhavu, kwenze kube ngokwakho
Sithemba ukuthi uyayithanda imikhiqizo esiyincomayo! Zonke zikhethwe ngokuzimela ngabahleli bethu. Ukuze wazi nje, i-BuzzFeed ingaqoqa isabelo sokuthengisa noma esinye isinxephezelo kuzixhumanisi ezikuleli khasi uma uthatha isinqumo sokuthenga kubo. O, ne-FYI - amanani anembile futhi izinto zisesitokweni kusukela nge ...
Ungaya Kanjani Okuluhlaza: Egumbini Lokugeza
Indlu yokugezela yigumbi lapho siqala khona futhi siphela khona usuku nosuku, ngezindlela ezahlukahlukene zokuhlanza ezenzelwe ukusisiza ukuthi sihlale siphilile. Okungajwayelekile-ke, ukuthi igumbi lapho sihlanza khona amazinyo ethu, isikhumba sethu nayo yonke imizimba yethu (ingasaphathwa eyokulahla udoti wethu) kuvame ukugcwala amakhemikhali anobuthi, futhi, ...
Yini impahla ka-wei Yu enayo? Yini indlela yokugcinwa kukaWei Yu?
iyiphi indlela i-wei Yu egcina ngayo? 1, ekusetshenzisweni kwawo wonke umuntu ukukhumbula ukuthi indlu yokugezela inesibazi kumele ilungiswe ngesikhathi esifanele, ukuze siqhubeke nokusebenzisa. Unganyakazi ngasese ngemuva kokuthi kufakwe i-wei Yu, hambisa isikhundla sokufuna ukuxhumana nabasebenzi abangochwepheshe. Ungasebenzisi izinto ezinzima ukungqongqoza, ukushaya ...
Ukukhiqizwa okuphephile kwezinsuku ezingama-500
Kuze kube namuhla, umgomo wokulawulwa kokuphepha kokukhucululwa kwendle we-taizhou ugcwaliswe ngokugcwele izinsuku ezingama-500 amarekhodi e-zoro, aphula amarekhodi akhiqizeka kakhulu aphephile. Sihlala sinamathela emgomeni wabantu - ogcotshiwe, sicebisa ukuphepha komqondo wokuqala, sithuthukise ukuqwashisa ngokuphepha kwabasebenzi, siphumelele ...
ITaizhou kazhongao sanitary ware co ltd izobonisa imikhiqizo yethu yakamuva e-Kitchen & Bath China, eShanghai, ezoba ngoJulayi 15 kuya kuJulayi 17 2020, Ikheli: SHANGHAI NEW international expo centre Booth No: E5 B26 Ucingo: 1898652888